လူနှင့်သစ်တောဆက်နွယ်မှုဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲ | RECOFTC
သစ်ပင်တစ်ပင်ကနေ တစ်နှစ်အတွင်းမှာ မိသားစုတစ်စုစာ အသက်ရှူဖို့လုံလောက်တဲ့ အောက်ဆီဂျင် ထုတ်လုပ် ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကို သင်သိပါသလား? ဒါဟာ မြန်မာ့သစ်တောများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲက တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်!
သစ်တောများထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းများ နဲ့ သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်မှုတို့ အားကောင်းစေဖို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ RECOFTC အဖွဲ့မှ ကူညီဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ Voices for Mekong Forests စီမံကိန်းရဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “လူနှင့်သစ်တောဆက်နွယ်မှု ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲ” ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။
လူနှင့်သစ်တောဆက်နွယ်မှုကို ပြသထင်ဟပ်နိုင်မယ့် ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို ပေးပို့ယှဉ်ပြိုင်ပြီး အောက်ပါဆုများကို ရယူလိုက်ပါ။ ပေးအပ်မယ့်ဆုတွေကတော့
ပထမဆု - Fujifilm Instax SQUARE SQ1 camera + smart watch
ဒုတိယဆု - Fujifilm Instax SQUARE SQ6 camera
တတိယဆု - Fujifilm Instax mini11 camera
နှစ်သိမ့်ဆု - အမှတ်တရလက်ဆောင် ကျောပိုးအိတ် တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
* လူနှင့်သစ်တောဆက်နွယ်မှုကို ထင်ဟပ်စေတဲ့ ဓါတ်ပုံများနဲ့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ် *
ဥပမာ - သစ်တောကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သစ်တောသစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများထုတ်ယူခြင်း၊ သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း အစရှိသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ။
(က) မည်သည့် ဒစ်ဂျင်တယ်ကင်မရာ၊ ဖုန်းကင်မရာတို့နှင့်မဆို ရိုက်ကူး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။
(ခ) ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးလျှင် ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲခေါင်းစဉ်နှင့် ကိုက်ညီသည့် ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံအထိ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် နိုင်ပါသည်။
(ဂ) ပြိုင်ပွဲဝင်မှရိုက်ကူးထားသည့် မူရင်းဓါတ်ပုံဖြင့်သာ ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသည့် ဓါတ်ပုံများဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
(ဃ) ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သည့်ဓါတ်ပုံတွင် ရိုက်ကူးသူ၏အမည်နှင့် အခြားစာသားများ ဖော်ပြထားသည့် ရေစာများ (watermarks) ပါဝင်ခြင်းမရှိစေရ။
(င) Facebook အပါအဝင် စီးပွားရေးကြော်ငြာများ၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမီဒီယာများနှင့် web page များတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြအသုံးပြုထားပြီးဖြစ်သည့် ဓါတ်ပုံများဖြင့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်၍ မရပါ။
(စ) ပြိုင်ပွဲဝင်ဓါတ်ပုံများ ပေးပို့ရာတွင် ပြိုင်ပွဲဝင်သူ၏အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အတူ ယှဉ်ပြိုင်သည့်ဓါတ်ပုံကို ရိုက်ကူးခဲ့သည့်နေရာနှင့် ဓါတ်ပုံ၏အကြောင်းအရာ ဖော်ပြချက်(caption) တို့ကို အတူတကွ ရေးသား ဖော်ပြပြီး အီးမေးလ်လိပ်စာ yukiko@recoftc.org သို့ ပေးပို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။
(ဆ) ပြိုင်ပွဲဝင်ဓါတ်ပုံမှာ မိမိ၏မူပိုင်ဖြစ်ကြောင်း ပြိုင်ပွဲဝင်ဘက်မှ တာဝန်ယူရမည် ဖြစ်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာအငြင်းပွားမှုပေါ်ပေါက်လာပါက ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သာ အတည်ဖြစ်ပါသည်။
(ဇ) ဆုရဓါတ်ပုံများအား RECOFTC အဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန် သဘောတူညီရမည်ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသည့်အကြိမ်တိုင်းတွင် မူရင်းဓါတ်ပုံပိုင်ရှင်အမည်အား အသိအမှတ်ပြု ဖော်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဟတ်ရှ်သကေင်္ကတ စာသား (#လူနှင့်သစ်တောဆက်နွယ်မှုဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲ) ကိုအသုံးပြုပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ(Facebook)တွင် ဝေမျှပေးမှုကိုလည်း ကြိုဆိုပါသည်။
*၂၀၂၀ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ရက်နေ့ညနေ (၅)နာရီ နောက်ဆုံးထားပြီး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြရန်ဖြစ်သည်။ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သည့် ဓါတ်ပုံများထဲမှ ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဓါတ်ပုံများကို ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့မှ ရွေးချယ်ပြီး ဆုရရှိသူများကို ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင် ကြေငြာပေးသွားပါမည်။
ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲအကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန် - ဒေါ်ယူကီကို၊ ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးအရာရှိ yukiko@recoftc.org ထံသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
Yu Ki Ko